Sabtida quruxda badan | Iskaashiga Jacaylka Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Maalmaha fasaxyada ee xafladaha gaarka ah
Maalmaha fasaxyada ah ee dabiiciga ah
Sabti maalmaha fasaxa ah oo kali ah waa inuu horay usbuuc dhamaadaa. Bilaabista Sabtiyada habeenkii iyo mashquulinta sheekooyinka isniinta soo socda ee galabtii Axadda ayaa keena walwal badan marka loo eego nasashada.
Fikradaha fasax jaceyl ah
Waa wax cajiib ah haddii aad bilaabi karto fasax jimce ah habeenkii jimcaha. Kadib, marka hore, waxaa jira habeenkii hurdo, inta aad rabto, barnaamijka. Quraacda sariirta, waxaa laga yaabaa in lagu daro champagne ama champagne. Sidaa daraadeed waxaad xoojineysaa inaad si buuxda ugu raaxaysato sabtida soo socota oo aad ku raaxeyso
Lammaane habeenkii jaceylka ah
Nasiib darro fasaxyada oo leh caafimaad
Sidaa daraadeed waxba walbaa jacaylka ah, waxaa lagula talinayaa inaadan wakhti fasax ah ku qaadin afarta derbi ee gudaha ah. Wax kasta oo aad mar walba ogeysiiso waa wax aad "kaliya" qaban kartid. Sidee looga soocaa ulaha si ay ulaha iyo helaan nabad dhab ah.
Safarka todobaadka jacaylka ah uma baahna in uu ka fogaado. Magaaladu waa weyn tahay ama midka xiga ee weyn waa hubaal qurux badan. Dadka deggan magaalooyinka, hudheelada miyiga ah ama martida caanka ah ee badda dhexdeeda ayaa ah isbeddel weyn oo ka yimaada magaalada jilicsan.
Xitaa hudheelka raaxada ah ayaa noqon kara hal mar. Qaar badan oo ka mid ah guryahaas ayaa waxaa jira qorshe gaar ah oo loogu talagalay lamaanayaasha. Waxaad kala dooran kartaa noocyo kala duwan oo caafimaad leh oo ka kooban qubeys, mashiinno iyo daaweyn kale oo qurux badan isaga iyo iyada. Codsiyadaasi waa ku raaxaysan karaan, qolkaaga ama qolalka gaarka ah ee hoteelada.
In HBS waxaa jira ma aha oo kaliya dhadhan siman ee ubaxa ama miraha in doorbidaan Xaakimkii, laakiin sidoo kale oo kulul sida maydhashada ee scrubs macsarada biir aan nuurad lahayn ama cusbo-malab isku dar ah oo nin runtii jeclaa.
Haddii aad leedahay shaqo badan oo aad ku sameysid hudheelada, waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad joogtid hoteelka caadiga ah ee waqtigaaga gaarka ah. Sidee ku saabsan fasax jaceyl ah oo ku saabsan igloo? Ku dhajiyay cayayaanka jilicsan ee jilicsan, waa wax aad u raaxeysanaya halkaas. Igloos si adag ayaa loo qurxiyey oo si aan toos ahayn u iftiiminaya.
Fikradda kale waa isbuuc dhammaadka wiigga. Hudheelka Hay ayaa hadda laga helaa gobollo badan. nidaamyada noocan oo kale ah sida caadiga ah waxaa ka mid ah cabitaanka soo dhaweynayaa, Hofrundgänge, multi-Dabcan casho shumaca ka dibna habeen sariirta weyn ee dhalatada hay waxyaabaha udugga leh. Quraacda ayaa diyaar u ah maaddooyinka maxalliga ah waxayna u adeegeen waqtigii la rabay.
Dabayaaqada dhammaadka wiigga ayaa khibrad u leh Baumhaushotel. Guryaha dhaadheer, guryaha geedka waa kuwo adag oo ammaan ah oo aan haysan raaxo.
Isbeddel cusub oo loogu talagalay maalmaha fasaxa ah ee jaceylku wuxuu ka yimaadaa Maraykanka. Waxaa jiray hoteelo gaar ah wakhti aad u dheer qalab aad u fara badan. Qolalka waxaa lagu qurxiyaa sida ay u kala horreeyaan eroticism. Jardiinooyinka qolka, qolal ballaadhan oo waaweyn iyo alaabo lagu ciyaaro ayaa laga heli karaa huteelada, kuwaas oo hadda jira Germany.
Niyadjabintu waa arrin dabcan, iyo fiicnaanta jir ahaaneed ayaa lagu daryeelayaa qolka. Guryaha leh jawiga firfircooni uma oggola carruurta martida, sidaas darteed waxaad si dhab ah u noolaan kartaa fantasiyaddiisa oo aan waxba qabin.
Dareemista Boqorka ama boqoradda: taasi waa waxa badan ee hudheelada hudheelka ah. Guryaha amiirku waxaad ku bixisaa maalmo iyo habeeno qurxoon, waxaana lagu dhejiyaa culeyska sida waafaqsan xeerarka farshaxanka ee karinta.
Toddobaad jacayl ah ayaa la yaab leh in laga baxo dhammaan ilbaxnimada. Guri ama guri dabaq ah, oo leh qariidad qurux badan oo laga helo harada, badda ama buuraha ayaa kugu martiqaadaya.
Qalab ku filan iyo qalab dhamaystiran oo leh dharka sariirta iyo dhamaan siyaabaha kale ee firfircoonida martida. Iyadoo kuwaas waxaad si fudud u qaadeysaa fure u noqoshada degaanka oo ay haystaan ​​ilaa ay ka baxayaan nabadda cajiibka ah. Maalmahaas waxaad ku qaadan kartaa guriga ama sariirta ama aad u tagto dabiiciga. No telefoon, kombiyuutar ama laptop, telefishin iyo raadiye lahayn, telefoonkuna ma aha inuu dhibsado wadajirka.
Joogitaanka dabiiciga ah ee dabiiciga ah
Ugu dambeyntii waa waqti aad ku raaxeyso, cunto karisid oo aad wada raaxaysataan. Dabeecadda ayaa dabciga madaxa u garaaca madaxaaga, waxaadna ka dhigtaa fikrado cusub iyo fikrado cusub. Waxaad dhageysataa dhawaaqyada dabiiciga ah waxayna dareemeysaa noolaan iyo hagaag.
Muusiggu dhab ahaantii waa arrin ka qaybqaadata jacaylka. Maalmaha jimicsiga ee muusikada, waxaad ku dari kartaa booqasho riwaayadeed oo leh cunto quruxsan iyo habeenkii habeenimo ee hudheel qurux badan.
Munaasabadda ayaa raadineysa muusikada labadaba lammaanuhu ku guuleysan karaan, ama wax cusub oo cusub oo labadoodaba aan weli ogeyn. Waxay noqon kartaa mid caadi ah ama la garaaco, pop iyo dhagax, halkaas oo aad ku nooshahay dhinaca duurjoogta. Xitaa muusikada iyo jacaylka sheekooyinka marxaladda masraxa waxay aad ugu fiican yihiin si ay ula qabsadaan niyadda jaceylka.
Haddii dhacdadu dhacdo jimcaha, waxaad isticmaali kartaa Sabtida soo socota si aad wax uga qabato hawlo kale. Duulimaadyada goobaha laga helayo helikabtarka ama bakeeriga gobolka waa waaya-aragnimo aan caadi ahayn.
Booqashada wakhti dheer ee qubeyska kuleylka leh ee caalamka sauna iyo xarumaha fayoqabka waxay bixiyaan cimilo yar oo wanaagsan. Xitaa safarka wax iibsiga wuxuu noqon karaa mid jaceyl ah, haddii aad raadineyso rinjiga quruxda badan ee quruxda badan, oo aad isku dayeyso fiidkii ee hoteelka.
Jacaylka ee xiriirka